Andrea Pirlo Oo Ka Fadhiistay Kubadda Cagta Guud Ahaan
Home » Africa » Andrea Pirlo Oo Ka Fadhiistay Kubadda Cagta Guud Ahaan
Laacibkii Khadka dhexe ee Xulka Talyaaniga, Andrea Pirlo ayaa ku dhawaaqay inuu si fasmi ah uga fadhiistay guud ahaan dunida kubadda cagta kadib markii uu kulankiisii u dambeeyey u saftay naadiga uu ka tirsanaa ee New York City.
38 sano jirkan xulka Talyaaniga u saftay 116 kulan, ayaa ka caawiyey inay ku guuleystaan koobkii aduunyada ee sanadii 2016 kii.
Pirlo wuxuu ka bilaabay ciyaarta kubadda cagta naadiga Brescia waxaanu sidoo kale u soo ciyaaray kooxaha Inter, AC Milan iyo Juventus ka hor intii aanu ku biirin horyaalka Maraykanka ee Major League Soccer laba sanadood ka hor.
“Maanta ma soo gunaanadin oo kaliya u ciyaarista kooxda New York balse waxaa halkaas ku so oaf-jarmay guud ahaan safarkaygii ciyaaryahannimo ee kubadda cagta,” ayuu yidhi.
Warsaxaafadeed uu ku baahiyey bartiisa Twitter kana wuxuu Pirlo ugu mahad celiyey, “guud ahaan kooxihii uu u soo ciyaaray ” iyo “ciyaaryahan kasta oo aan iska soo garab ciyaarnay, kaas oo aan ku faraxsanaa ka barbar ciyaaristiisa “.
Naadigiisii hore ee Juventus ayaa shaqsiyadiisa ku sifeeyey “Cabqari dhab ah ” oo soo maray kubadda cagta..
Tabobaraha naadiga New York City – Patrick Vieira isna wuxuu Pirlo ku sifeeyey “shaqsi kubadda cagta isbedel ku sameeyey “.
Ka sokow inuu xulkiisa lagu naanayso – Azzurri – ka dhigay horyaalka xulalka kubadda cagta aduunka, Pirlo wuxuu sidoo kale ku guuleystay bilado badan iyo koobab kala duwan oo dhamaantood qaali ah, mudaddii 22 ka sanadood ahayd ee uu kubada cagta ku soo dhex jiray.
Filed in Africa Italy Wararka Maanta
Tabobarihii West Ham – Slaven Bilic Oo La Eryey Iyo David Moyes Oo U Dhaw Bedelkiisa
Andrea Pirlo: Daawo Xasuusihii Uu Kubadda Cagta Kaga Tegay